बाँकी>>	रा.यो.आ किल्क गृह पृष्ठ>>कार्य तथा जिम्मेवारीहरू नेपाल सरकारको तत्कालीन कार्य सम्पादन नियमावली २०४८ अनुसार देहायअनुसार रा.यो.आ.का कार्यहरू रहेका छन् ।
नेपाल सरकार, मन्त्रालयहरू तथा विभागहरूलाई आवधिक योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू परिमार्जन सम्बन्धमा सल्लाह दिने ।
नेपाल सरकारलाई संभाव्यता अध्ययन तथा ठूला आयोजनाहरूका गुरुयोजना तयार पार्न सघाउ पुर्‍याउने ।
वैदेशिक लगानी/सहायता स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रालय तथा विभागहरूलाई सल्लाह सुझाव दिने ।
आयोजना प्रस्तावहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने ।
नेपाल सरकारले वि.सं. २०५० असार ४ को कार्यकारी निर्णय अनुसार रा.यो.आ. लाई निम्नानुसार कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
आधारभूत रूपमा विकास योजना तर्जुमा तथा दीर्धकालीन विकास सोच अनुरुपको खाका भित्र रहने गरी आवधिक विकास योजना निर्माण गर्ने ।
स्वदेशी तथा विदेशी प्रविधिको सँगसँगै आन्तरिम तथा वाह्य स्रोतहरू अन्वेषण गर्ने तथा विकासको दर तीव्रतर तुल्याउन सरकारलाई सुझाव दिने ।
देशको आर्थिक अवस्थानुसार दिगो विकास हासील गर्न नवितम् धारणाहरू विकास गरी लागु गर्ने ।
वार्षिक कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई मद्वत गर्ने ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी संस्थागत विकासका लागि सरकारलाई सुझाव दिने, कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनको योजनाको लक्ष्य अनुरुप प्रगति भए नभएको अनुगमन गर्ने तथा सो योजना तथा कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने ।
क्षेत्रगत मन्त्रालयहरू, विभागहरू तथा अन्य निकाय तथा स्थानिय निकायहरूलाई मार्ग निर्देशन, सल्लाह तथा सुझाव उपलब्ध गराउने र योजना तथा आयोजना तर्जुमाका लागि मद्वत गर्ने ।
आवश्यक नीति तर्जुमा, मूल्याङ्कन र योजना प्रकृयाको परिमार्जनको लागि सूचना सङ्कलन गर्न मार्गनिर्देशन गर्ने, कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने ।
आर्थिक प्रशासन नियमावली ०५६ ले रा.यो.आ.लाई निम्न भूमिका प्रदान गरेको छ ।
रा.यो.आ.ले आगामी आ.व.को बजेट तर्जुमाको लागि अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयहरूको लागि नीतिगत लक्ष्य तथा प्राथमिकताको सम्बन्धमा मार्ग निर्देशन उपलब्ध गराउँछ जुन वजेट तर्जुमाको निर्देशन दिनु भन्दा अगाडि गर्ने गर्दछ ।
मन्त्रालयका सचिवले जिल्ला स्तरीय आयोजना स्वीकृतिको लागि नीतिगत खाका संरचना (frame work) तयार पार्दछ ।
केन्द्रीय स्तरका आयोजना स्वीकृत गर्दछ ।
कार्तिक मसान्त सम्ममा आउँदो/आगामी आ.व.का लागि विकास कार्यक्रमहरूका लागि नीति तय गर्दछ ।
कार्तिक मसान्त सम्ममा नेपाल सरकारका कार्यालयहरूलाई कुनै पनि किसिमको वैदेशिक सहयोग वा नगद प्राप्ती वा वैदेशिक सहयोगको लागि सहमतिमा पुग्नका लागि सल्लाह उपलब्ध गराउँछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले माथि उल्लेख गरिएका कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न विविध क्रियाकलापहरू गर्दै आएको छ । ती क्रियाकलापहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।
देशको योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्ने अंगको रूपमा रा.यो.आ.ले देशको आर्थिक विकास र आर्थिक व्रिmयाकलापहरू सम्बन्धमा नेतृत्वदायी र प्रमुख सल्लाहकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ । सबैजसो आर्थिक विकास र आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू आयोगको आफ्नै प्रयासमा वा सल्लाह वा सुझावमा आधारित भएर लागु हुने गर्दछन् ।
देशको आर्थिक विकास र सामान्य आर्थिक क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापनमा आयोगले मुख्य संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
आर्थिक विकासका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनार्थ आयोगले सक्रिय र सकारात्मक सहजकर्ताको रूपमा कार्य सम्पादन गरिरहेको छ । साथै, यी आर्थिक नीति र कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा प्राय सबै सरकारी निकायहरूका चुनौती तथा समस्याहरू समाधानार्थ सहयोग पुर्‍याउँछ ।
रा.यो.आ.ले नीति परिमार्जनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसले आर्थिक उदारीकरण र अन्य सुधार कार्यक्रमहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका सफलतासाथ निर्वाह गरेको पनि छ ।
आयोगले देशको आर्थिक विकासको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको निमित्त केन्द्रीय स्तरको संस्थाको रूपमा कार्य गरिरहेको छ ।
आयोगले देशको आर्थिक सरोकार र विकासको सम्बन्धमा विचार आदान प्रदान, सूचना सप्रेषण, छलफल तथा अन्तर्‍िक्रया गर्ने मञ्चको रूपमा कार्य गरिरहेको छ ।
आयोगले देशका निजी क्षेत्रको समेत समस्याहरू विश्लेषण गर्ने तथा समाधान विकासको संस्थाको रूपमा कार्य गर्दछ ।